Jid-dhaqameedka iyo Jidka Sare ee dhijitaalka ah iyo kuwa tooska ah ayaa ka fiicnaaday inta lagu jiro aafo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jid-dhaqameedka iyo Jidka Sare ee dhijitaalka ah iyo kuwa tooska ah ayaa ka fiicnaaday inta lagu jiro aafo
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Kuwa ugu Wanaagsan Warshadaha oo lagu sharfay WTM London
Tani waa aragti soo jiidasho leh oo ku saabsan sida tignoolajiyada waxtarka leh - dareenka ugu ballaaran - ay ahayd intii lagu jiray heerka sare ee masiibada.
Tiknoolajiyada dhijitaalka ah ayaa si wax ku ool ah ugu adeegtay warshadaha marka loo eego xulashooyinka soo jireenka ah inta lagu guda jiro masiibada Covid-19, ayaa daaha ka qaaday cilmi baaris ay soo saartay maanta (Isniin 1da Noofambar) ee WTM London iyo Travel Forward.
Ku dhawaad ​​700 oo hawl-wadeenno sarsare ah oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa ka qayb qaatay Warbixinta Warshadaha WTM waxaana la waydiiyay inay qiimeeyaan waxtarka tignoolajiyada iyo kanaalada kala duwan. Ku dhawaad ​​kala badh muunada (47%) ayaa sheegay in kanaalada suuqgeynta dhijitaalka ah sida hagaajinta mashiinka raadinta, raadinta lacag bixinta iyo suuqgeynta iimaylka ay aad waxtar u lahaayeen intii lagu jiray masiibada, iyadoo 30% dheeri ah ay ku sifeeyeen inay yihiin kuwo wax ku ool ah. Kaliya 6% ayaa ku tilmaamay kuwo aan waxtar lahayn.
Taas beddelkeeda, 25% kaliya ee hawl-wadeennada ayaa sheegay in wakiillada safarka waddooyinka ay aad ugu wax ku ool u yihiin taageeridda ganacsigooda inta lagu jiro xiisadda, iyada oo wax yar ka badan (31%) ay sheegeen in ay aad waxtar u leeyihiin. Tiro aad u tiro badan (16%) ayaa sheegay in wakiilada jidadka sare ay yihiin kuwo aan waxtar lahayn.
Guud ahaan marka loo hadlo, kanaalada tooska ah ee macaamiisha ah ayaa sameeyay sida ugu xoogan inta lagu jiro aafada. Goobaha caanka ah ee shabakadaha, abka iyo xarumaha xidhiidhka ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwo aad waxtar u leh in ka badan 70% muunada, iyadoo tirada meesha ka saaraysa inay yihiin kuwo aan waxtar lahayn waxay ahaayeen boqolleyda hal lambar.
Taas bedelkeeda, warbaahinta dhaqameed sida daabacaadda, TV-ga iyo fariimaha tooska ah waxay ahaayeen kuwo aad waxtar u leh wax ka yar 50%, laakiin boqolkiiba aad u sarreeya - 17% - waxay meesha ka saareen kanaaladan inay yihiin kuwo aan waxtar lahayn.
Meelo kale, execs ayaa si gaar ah wax looga waydiiyay laba isbeddel ee tignoolajiyada ka hor xilligii Covid. Daruurtu waxay ahayd mid wax ku ool ah in ka badan kala badh muunada (52%), in kasta oo bixiyeyaasha daruuraha iyo maareeyayaasha akoonnada ay danaynayaan inay ogaadaan sababta tobankiiba mid u maleeyay in daruurtu aanay waxtar lahayn. Sidoo kale, API-yada - software u oggolaanaya laba nidaam inay is-dhexgalaan - waxay waxtar u lahaayeen in ka badan kala badh muunadda laakiin weli waxtar uma yeelan 8%.
Si kastaba ha ahaatee, qaybta ugu waxqabadka liidata waxay ahayd bangiyada sariirta iyo isku-darka, iyada oo in ka yar kala badh (48%) ay sheegeen in ganacsiyadani ay taageerayaan intii lagu jiray aafada, qiimeynta oggolaanshaha ugu hooseeya ee mid kasta oo liiska ku jira. Mar labaad, tiro aad u tiro yar - 13% - waxay meesha ka saareen inay yihiin kuwo aan waxtar lahayn.
Taas bedelkeeda, kiis isticmaalka tignoolajiyada ugu waxqabadka wanaagsan wuxuu ahaa isgaadhsiinta, shaqaalaha iyo macaamiisha labadaba. In ka badan 80% muunada ayaa sheegay in qalabkani ay waxtar u leeyihiin isticmaalka gudaha, iyadoo 4% kaliya ay sheegeen in qalabkani hoos u dhacay. Isticmaalka tignoolajiyada si loola hadlo macaamiisha dibadda waxay si wax ku ool ah u shaqeysay ku dhawaad ​​​​saddex-meelood afar (74%), iyada oo kaliya 6% aan ku qanacsanayn.
Simon Press, Agaasimaha Bandhigga, WTM London iyo Horu-marinta Safarka, ayaa yidhi; "Tani waa aragti soo jiidasho leh oo ku saabsan sida tignoolajiyada waxtarka leh - dareenka ugu ballaaran - ay ahayd intii lagu jiray heerka sare ee masiibada. Waxay muujinaysaa in muuqaalka tignoolajiyada uu wali ku kala qaybsan yahay tignoolajiyada qaar iyo/ama kanaalada aan wali ku haboonayn ujeedada oo ay ka gaabiyeen waxa loo baahan yahay, halka kuwa kalena ay u muuqdaan inay la soo baxeen ogolaansho caalami ah.
"WTM London iyo walaasheeda tignoolajiyada diiradda saareysa waxay tusinaysaa Safarka Horudhac waxay u joogaan inay ka caawiyaan shirkadaha safarka inay qiimeeyaan nooca tignoolajiyada ay u baahan yihiin iyo cidda lala kaashanayo dib u dhiska safarka."